कोरोना खोपको दुबै डोज लगाइसकेका मानिस कति सुरक्षित ?, विश्वकै ठूलो अध्ययन के भन्छ ? – Butwal 24 News
August 5, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on कोरोना खोपको दुबै डोज लगाइसकेका मानिस कति सुरक्षित ?, विश्वकै ठूलो अध्ययन के भन्छ ?
काठमाडौं – कोरोना खोप दुबै डोज लगाइसकेका मानिस ९३ प्रतिशत सुरक्षित हुने अध्ययनले देखाएकोे छ । भर्खरै भारतका १५ लाख ९० हजार धेरै स्वास्थकर्मी र फ्रन्टलाइन वर्कर्समाथि भएको अध्ययनअनुसार कोभिशिल्ड दुबै डोज लिइसकेका मानिस ९३ प्रतिशत सुरक्षित छन् ।
ब्रेक थ्रुु इन्फेक्सन (खोप लगाइसकेपछि हुने संक्रमण) बारे भारतमा गरिएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो अध्ययन हो । यस अध्ययनअनुसार खोप लगाइसकेपछि कोरोना हुने दर १.६ प्रतिशतमात्रै छ । अर्थात्, १ हजार मानिसमा केवल १६ जनालाई कोरोना हुनसक्छ । यो अध्ययन ‘द न्यु इङल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन’मा प्रकाशित छ ।
खोपको प्रभावकारीताबारे विश्वकै ठूलो अध्ययन
आम्र्ड फोर्सेज मेडिकल कलेजको यस अध्ययन विश्वकै अहिलेसम्मको ठूलो अध्ययन हो । अहिले यसको अन्तरिम नतिजा जारी गरिएको हो ।
अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार यसअघि गरिएका अध्ययनको स्याम्पल साइज १० लाखभन्दा कम थियो । भारतको नीति आयोगका सदस्य डाक्टर विके पालका अनुसार यो अध्ययन १५ लाखभन्दा धेरै डाक्टर र फ्रन्टलाइन कर्मचारीमा गरिएको थियो ।
भारतमा १६ जनवरीमा खोपको सुरुवात भएको थियो । मेइ ३० सम्म खोप लगाइसकेका १५ लाख ९० हजारमा खोपको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिएको हो ।